यस्ता छन् बजेटले करको दायरा र सिमा बढाएका ६ शीर्षकहरु - Suvham News
यस्ता छन् बजेटले करको दायरा र सिमा बढाएका ६ शीर्षकहरु
May 29, 2016 by gsmktm
बजेट सार्वजनिक भएसँगै करको दायरा पनि बढेको छ । सरकारले बजेटद्धारा आयकरको दायरा तथा सीमा विस्तार गरेको हो । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राकृतिक व्यक्तिको आयकरको छुटको सीमा रु. दुई लाख पचास हजारबाट तीन लाख पचास हजार र दम्पतीको आयकर छुटको सीमा रु. तीन लाखबाट रु. चार लाख पुर्याएको छ । साना तथा मझौला करदातालाई कारोबारमा लाग्ने आयकरको दरलाई समेत बजेटमा घटाइएको छ । गैर करका दरलाई प्रत्येक दुई वर्षमा आर्थिक वर्ष अगाडि परिमार्जन गर्ने व्यवस्था समेत बजेटमा मिलाइएको छ ।
१.सुर्ति र मदिराजन्य वस्तुको भन्सार वृद्धि
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षसँगै मदिरा, बियर र चुरोट लगायतका वस्तुको आन्तरिक उत्पादन तथा आयातमा लाग्ने अन्तशुल्क तथा भन्सार महसुलमा वृद्धि हुने बजेटमा उल्लेख छ । यो वृद्धिले यस्ता वस्तुको मूल्य महँगो हुने सम्भावना बढेको छ ।
आयआर्जन र व्यवसाय गर्ने सबैलाई स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गरी तीन लाख नयाँ करदातालाई करको दायरामा ल्याउने लक्ष्य पनि बजेटमा राखिएको छ । वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी आय भएकालाई आय विवरण लिई सूचना बैङ्क बनाउने व्यवस्था पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ ।
३.एक करोड कारोबारीको लेखापरीक्षण नपर्ने
एक करोडसम्मको कारोबार गर्ने साना तथा मझौला करदाताले लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सेवा तथा वस्तु कारोबारको मूल्य अभिवृद्धि करको सीमा १० लाखबाट २० लाख पु¥याइएको छ । औद्योगिक प्रदर्शनी कक्ष, बिक्री कक्ष, पसल, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा बारमा प्रदर्शन गरिने मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि करसहितको मूल्य अङ्कित गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । आयात निर्यात व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न सङ्केत नम्बरको सुरुवात गर्ने बजेटले घोषणा गरेको छ ।
४.फलफूल र मौरीपालन व्यवसाय बिमा प्रिमियममा कर छुट
कृषि, सिँचाइ तथा पशुपक्षीपालन व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र उपकरणमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल तोकिएको छ । त्यस्तै पक्षी, माछा, फलफूल र मौरीपालन व्यवसायको बिमा प्रिमियममा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । माछामासु तथा दूध ढुवानी गर्ने ट्याङ्करमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार शुल्क तथा ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेटमा लाग्ने भन्सार महसुलमा दुई तिहाइ छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधन खरिदलाई बजेटले प्रोत्साहन गरेको छ । यसका लागि विद्युतीय सवारीको आयातमा अन्तःशुल्क छुट र दस प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
५.क्यान्सर, मुटु र मिर्गाैला उपचारसम्बन्धी उपकरणमा पूर्ण कर छुट
क्यान्सर, मुटु र मिर्गाैला उपचारसम्बन्धी उपकरणमासमेत मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यस्ता उपकरणमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ ।
६.कर प्रणालीमा सुधारको योजना
सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि कर प्रणालीमा सुधारको समेत योजना सार्वजनिक गरेको छ । कर कानुन र प्रक्रियालाई सहज बनाउन कर संहिता विधेयक, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नमुना कर कानुन र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्घीय वित्त व्यवस्थापन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । कर परीक्षणको अभिलेखका आधारमा कर परिपालनाको स्तर निर्धारण गरी करदातालाई उत्तम, सामान्य र जोखिमपूर्ण वर्गमा वर्गीकरण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।
Prevकसरी जुटाउँदैछ सरकार घोषित १० खर्ब रुपैयाँ ? बुझौं नालीबेली
Next३ वर्षभित्र प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ बिमा